स्टेजमै पांडेले गर्लाम्मै अँगालो हाले, जिग्री ट्वाल्ल परे ! (भिडियो हेर्नुहोस) - Enepalese.com
स्टेजमै पांडेले गर्लाम्मै अँगालो हाले, जिग्री ट्वाल्ल परे ! (भिडियो हेर्नुहोस)
इनेप्लिज २०७५ पुष १९ गते ३:३१ मा प्रकाशित
रेवान पोखराको आयोजनामा लेकसाइडमा जारी पोखरा सडक महोत्सवमा दर्शको चाप ह्वात्तै बढेर आएको छ । महोत्सव तेश्रो दिन आइपुग्दा सडकमा अवलोकनकर्ताहरुको निकै भिड लागेको छ ।
त्यसैगरि महोत्सवको मुख्य स्थल कोमागानेपार्क पनि खचाखच दर्शकले भरिएको छ ।आइतबार तमुहरुको पर्व ल्होसरको अवसरमा गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक विदा दिइएका कारण पनि ल्होसर मनाइसकेकाहरु त्यसपछि सडक महोत्सवतिर आउँदा दर्शकहरुको उपस्थिती एक्कासि बाक्लिएको हो ।
यसैबीच सडक महोत्सबमा भद्रगोलका जिग्री पांडे र बाहुन डनले दर्शक लाई हसाएका छन् । हेर्नुहोस २० औं सडक महोत्सवमा कस्तो प्रस्तुति राखे जिग्री पांडे र बाहुन डनले :